Thit Htoo Lwin: 5/15/11 - 5/22/11
19/05/13 - 26/05/13 (169)
Weekly Eleven News Journal Vol(6) No(34)
The Voice ဂျာနယ်, May 23- 29 , 2011 ထုတ်
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမှုများကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အမြန်ဆုံး ပြီးပြတ်ရန် ဆောင်ရွက်နေ
Monday, 23 May 2011 14:09 ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမှုများကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အမြန်ဆုံးပြီးပြတ်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ယခင်က အမှုတစ်ခုကို နှစ်ရက်၊ သုံးရက်ကြားနာပြီးနောက် ပြန်လည်ရုံးချိန်းလေ့ ရှိသော်လည်း ယခု အခါ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အမှုတစ်ခု ကို တစ်ပတ်လုံး အပြန်အလှန်ကြားနာ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများကို ရင်ဆိုင်နေရသူများက သစ်ထူးလွင်
5/23/2011 06:06:00 PM
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ၁၇ ဦးဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းထား
Monday, 23 May 2011 14:15 ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ၁၇ ဦးဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူ များမှာ သူရဦးရွှေမန်း (ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးဌေးဦး (အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး)၊ ဦးသောင်း(အတွင်း ရေးမှူး)၊ ဦးတင်ထွတ် (အတွင်းရေး မှူး)၊ ဦးအောင်သောင်း (အတွင်း ရေးမှူး)၊ ဦးသိန်းဇော် (အတွင်းရေး မှူး)၊ ဦးစိုးသာ (ဗဟိုအလုပ်အမှု ဆောင်)၊ သစ်ထူးလွင်
5/23/2011 06:03:00 PM
တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသူ အမျိုးသမီးများတွင် အသက်အကြီးဆုံး ၅၀ နှစ်အထက်မှ အသက်အငယ်ဆုံး ၁၅ နှစ်အောက်များ ပါဝင်
Sunday, 22 May 2011 16:14 ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခြင်း ခံခဲ့ရပြီး နောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲ ပြောင်းခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများတွင် အသက်အကြီးဆုံး အသက် ၅၀ နှစ် အထက်မှ အသက်အငယ်ဆုံး ၁၅ နှစ်အောက်များ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရှမ်းပြည်နယ်မှ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခြင်း သစ်ထူးလွင်
5/23/2011 10:04:00 AM
Myanmar refugees living in fear
2011-05-23 10:16&amp;amp;amp;lt;a target='_blank' href='http://182.54.218.33/phpadsnew/www/delivery/ck.php?n=30955ff'&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;img border='0' alt='' src='http://182.54.218.33/phpadsnew/www/delivery/avw.php?zoneid=25&amp;amp;amp;amp;amp;n=30955ff' /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;gt;
Refugees sitting byariver at the Mae La refugee camp, located near the Thai-Myanmar border, some 550 kms northwest of Bangkok. Photo courtesy: AFP
Myanmar migrants illegally crossing the Thai-Myanmar border on an inner tube, in Mae Sot, some 500 kms northwest of Bangkok. Photo courtesy: AFP
MAE LA CAMP, May 23, 2011 (AFP) - At first sight the bamboo huts nestled at the foot of soaring limestone cliffs in the jungle could be mistaken for an eco-tourism haven -- except for the barbed wire and armed guards.
Beyond the perimeter fence and security checkpoints, designed to keep the residents in and unwanted visitors out, tens of thousands of refugees from war-torn eastern Myanmar are living in fear of being sent home.
Thailand's announcement in April that it wants to close nine border camps, holding more than 140,000 displaced people, has sent ripples of anxiety through the traumatised communities afteramore than two-decade presence.
"We're scared to go back," said Suai Pu, 27, who သစ်ထူးလွင်
5/23/2011 09:46:00 AM
It's Myanmar, not Burma, US diplomat told
May 22, 2011, 5:22 GMT FM Wanna Maung Lwin, leader Aung San Suu Kyi and Joseph Yun
Yangon - A senior US diplomat who visited Myanmar last week was asked to stop calling the country Burma if Washington wishes to promote bilateral relations with the new government, media reports said Sunday. သစ်ထူးလွင်
၀န်ကြီးများနှင့် စစ်အရာရှိများကြား အကျိုးစီးပွား အားပြိုင်နေ
ရန်ပိုင် Friday, 20 May 2011 17:04 အစိုးရသစ်၏ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် တချို့နှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တိုင်းမှူးများအကြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထား တင်းမာမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ဧရာဝတီမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ ချင်းတွင်းမြစ် အတွင်း ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ကိုင်နေသည့် ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီ ၏ လှေများ(ဓာတ်ပုံ - ချင်းတွင်းနတ်သမီး)
ပြီးခဲ့သည့် လကုန်ပိုင်းက အနောက်မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စစ်ကိုင်တိုင်း အတွင်း ရွှေတူးဖော်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးက ခေါ်ယူပြီး ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ဟု အကြောင်းပြကာ သတိပေးပြော ဆိုခဲ့သည့် အတွက် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် စိုးလွင်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် အကြား မပြေမလည်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု မုံရွာမြို့ရှိ ရွှေ တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ပြောသည်။
5/22/2011 10:04:00 AM
ဦးနေ၀င်း ဓာတ်ပုံတပုံတည်းနဲ့ ကျိကျိတက် ချမ်းသာသွားသူ တယောက် အကြောင်း
မောင်သော်က ပြောတဲ့ ပုံပြင်များ(၃)
တော်တော်ယုတ်မာတဲ့ ကောင်ကြီးကွာ နေရာတကာမှာ လူထုကို ခက်နေအောင် ကျပ်တည်းနေအောင် လူတိုင်း ထမင်းတလုပ်ကို မျက်လုံပြူးလျှာထွက် အသည်းအသန် ရုန်းကန် ရှာဖွေစားသောက် နေရတဲ့ ဘဝရောက်အောင် ပို့ထားတာ၊ သူ့ထင်ထားတာက လူတွေ အဲသလိုဖြစ်နေမှ သူ့ကို ပြန်မတော်လှန်နိုင်မှာလို့ ယုံကြည်ထားတာလေကွာ လုို့ ဦးနေ၀င်းအကြောင်းတွေ ပြောတုိုင်း ဆရာမောင်သော်က သစ်ထူးလွင်
5/22/2011 08:18:00 AM
ကျနော်ရောက်ခဲ့ဖူးသော ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဂိတ်များ
လူ့စွမ်းအင်သုံး ခေါတ်သစ်ရေယဉ်ထွန်းကားရာ မြ၀တီ-မဲဆောက်ဂိတ်
ပြီးခဲ့တဲ့လ ထိုင်းခရီးစဉ်အတွင်း ကျနော်ပထမ-ဆုံး သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့တဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကတော့ မဲဆောက်-မြ၀တီ- ချစ်ကြည်ရေးတံတားဂိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မဲဆောက်ဖက်ရောက်တိုင်း ဒီတံတားဆီ သွား။ မြ၀တီဖက်ကိုငေးကြည့်- အဲ...အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တောီ့ မြ၀တီကိုစိတ်ကူးနဲကျော်ဖြတ်ပီး သစ်ထူးလွင်
5/22/2011 02:27:00 AM
နိုပိုး ဒုက္ဒသည်စခန်းရှိ မကဒတ-တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများရဲ့ ဘ၀များ-
မရှင်းတာရှိရင်- ပီးခဲ့တဲ့ ၂-ပါတ်က တင်ပြခဲ့တဲ့ နိုပိုးစခန်းသွား ခရီးသွားဆောင်းပါးနဲ့ တွဲ- ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းကူပေးစေချင်ပါတယ်။
ထက်အောင်ကျော် May 21 2011
5/22/2011 02:12:00 AM
Weekly Eleven News Journal Vol(6) No(33)
ပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ရဲ့ပြောပြချက် အသံဖိုင် နားထောင်ရန်
မောင်မောင်ကျော်စိုးဟိန်း May 18 2011 အင်းစိန်ထောင်တွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကို နားထောင်ကြည့်ရအောင် သစ်ထူးလွင်
Bomb kills two near Myanmar capital: official
AFP/Graphic – A map of Myanmar showing the location of the capital Naypyidaw. At least two people died inabomb blast … – 26 mins agoYANGON (AFP) – At least two people died inabomb blast Wednesday onatrain near Myanmar's capital duringavisit to the country byaUS envoy,aMyanmar official said.
The explosion occurred in the early evening in Tatkone township in the Naypyidaw area, said the official, who did not want to be named.
"Two people includingawoman were killed and seven others were injured in the bomb blast," the official said.
5/18/2011 06:43:00 PM
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများ (၁၈-မေ-၂၀၁၁)
နှစ်ရှည်ထိမ်းသိမ်းခံ မြန်မာတွေ လွတ်မယ်(နှိပ်ရန်)
နေပြည်တော် တပ်ကုန်း မှာ ဗုံးကွဲပြီး လူ(၂)ဦးသေ(နှိပ်ရန်)
နေပြည်တော်ဗုံးကွဲ၊ အနည်းဆုံး လူ ၂ ဦးသေ(နှိပ်ရန်)
ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့ရုံနဲ့ မလုံလောက်ကြောင်း လူ့အခွင့်ရေး အဖွဲ့ ပြောကြား(နှိပ်ရန်)
ဗြိတိန် ဘရိုက်တန်ပွဲတော်မှာ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး(နှိပ်ရန်)
လွတ်မြောက်သူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၀ မပြည့်(နှိပ်ရန်)
လွတ်လာသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီရေး NLD စီစဉ်ဆောင်ရွက်(နှိပ်ရန်)
လွတ်ငြိမ်းခွင့်ကို မယုံ၍ ဆွေးနွေးရေးကိစ္စ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ သံသယရှိ(နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ်၏ အလုပ်သမား ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ဖို့တိုက်တွန်း(နှိပ်ရန်)
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပထမအဆင့်လို့ သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ဆို(နှိပ်ရန်)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း မြန်မာနှစ်သောင်းခွဲကျော် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွါး(နှိပ်ရန်)
လွတ်ရက်စေ့ခါနီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တစ်ဦး ဗန်းမော်ထောင်မှ ပြန်လွတ်(နှိပ်ရန်)
အစိုးရသစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ အမိန့် ဝေဖန်ရှုတ်ချမှုများရှိ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မြန်မာပြည် ရောက်ရှိ (နှိပ်ရန်)
ကုလ ကိုယ်စားလှယ် ပြောဆိုချက်တချို့ စိစစ်ရေးဖြုတ် (နှိပ်ရန်)
အိန္ဒိယက ဖမ်းထားသည့် တော်လှန်ရေးသမား ၃၁ ဦး လွှတ်မည် (နှိ်ပ်ရန်)
လာဘ်ယူအများဆုံး ၁၉ ကျောင်း ရန်ကုန်အစိုးရ ထုတ်ဖော် (နှိပ်ရန်)
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဆုတောင်းပွဲများ ဆက်လုပ် (နှိပ်ရန်)
နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ် ထောင်ချခံရသူ ရခိုင်တော်လှန်ရေး သမား တစ်ဦး ပြန်လည် လွှတ်မြှောက်လာ(နှိပ်ရန်)
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အခမ်းအနား ဖလောင်းချိတ်မြို့တွင် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ (နှိပ်ရန်)
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အကျဉ်းသားဦးရေ ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက်မှ ပြစ်မှုအသေးစား အကျဉ်းသားများ အပါအ၀င် အကျဉ်းသား ၁၄၀၀၀ ကျော်ကို သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်အဖြစ် လွှတ်ပေး(နှိပ်ရန်)
အမေရိကန် ဒု-လက်ထောက်ဝန်ကြီး မြန်မာပြည်သွားမည်(နှိပ်ရန်)
5/18/2011 09:59:00 AM
ဒီနေ့ နိုင်ငံတကာသတင်းများ (18 မေ 2011)
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အိန္ဒိယ မအောင်မြင်(နှိပ်ရန်)
ဘင်လာဒင် ရှိနေတာ ပါကစ္စတန် ခေါင်းဆောင်များ သိပုံမရ(နှိပ်ရန်)
ှဆီးရီးယားစစ်တပ်က ဒုက္ခသည်တွေကို ပစ်ခတ် (နှိပ်ရန်)
ဗြိတိန်ဘုရင်မ အိုင်ယာလန် သမ္မတနိုင်ငံ ရောက်ရှိ(နှိပ်ရန်)
ပါကစ္စတန်နဲ့ နေတိုး ရဟတ်ယာဉ်တွေ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်(နှိပ်ရန်)
5/18/2011 09:55:00 AM
Myanmar News Now: 18 May 2011
A Burmese worker walks pastawater fountain in Naypyidaw on Jan. 30, 2011 as the country's capital prepares for the opening of the national parliament. (Soe Than Win/AFP/Getty Images)
Political prisoners miss out in Burma(Click)
Burma: Prisoners' amnesty criticised as gesture to improve image(Click)
Myanmar fails to release political detainees(Click)
U.S. diplomat to hold talks with Myanmar government(Click)
Burma's prisoner release plana"sick joke"(Click)
5/18/2011 05:59:00 AM
အင်းစိန်ထောင် အကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးပုံ ရုပ်သံ (ဗွီဒီယို)
5/18/2011 05:54:00 AM
Top US official to visit Myanmar
Wednesday, 18 May 2011 01:59 USAWASHINGTON: A top diplomat from Washington will visit Myanmar for the highest-level US talks there since the junta's dissolution and the appointment ofanominally civilian government, the State Department said Tuesday. Joseph Yun, the deputy US assistant secretary for East Asia and Pacific Affairs Bureau, is scheduled to leave on Wednesday for Myanmar, also known as Burma, and stay until May 21, State Department spokesman Mark Toner said.
5/18/2011 05:44:00 AM